Warmly Welcome: မိန်းကလေးများရဲ့ မျက်ရည်
သဘာဝတရားက မိန်းကလေးများရဲ့ အားနည်းချက်ကို ဖြည့်စွက်ပြီး ထွက်ပေါက် ပေးတဲ့အနေနဲ့ မျက်ရည် လမ်းကြောင်းကို အပို တပ်ဆင်ပေး လိုက်သလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ မိန်းမသားတို့ လက်နက်ဟာ မျက်ရည်စက် ပါမောင်ရယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားကို နားထဲ ကြားယောင်နေမိ ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးတို့ရဲ့ အဓိက ကွာခြားချက်ကလဲ မျက်ရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတို့ ပင်ကိုယ် သဘာဝကိုက အငိုလွယ်ခဲ့ကြ တာပါ။
မိန်းကလေးများ ဘာအတွက်ကြောင့် မျက်ရည်ထွက်လွယ် ရပါသလဲ။? သိရန်တော့ ခက်လဲလှပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ မျက်ရည်လွယ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ အတွက် စိတ်ရှုပ်လေ့ရှိသလို တစ်ခါတရံလည်း စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေ အငိုလွယ်ရတဲ့ အကြောင်းခြင်းရာများ တစ်ရာမက ရှိသော်လည်း အဓိကအချက်ကတော့ .. ..
ဝမ်းနည်း လွန်လွန်း၍လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အမှားအယွင်း တစ်ခုခု လုပ်ခဲ့မိ၍လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆုံးရှုံး နစ်နာမှု တစ်ခုခုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေမှာတော့ ဖော်မပြနိုင်တဲ့ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေ့ အနေနဲ့ ရက်ပိုင်းလေးပဲ ရှိသေးတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုပါ။ ခင်မင်ရတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကို ချစ်လွန်လွန်းလို့ စမိခဲ့ပါတယ်။ စကားလေး တစ်ခွန်းအတွက်နဲ့ ငိုကြီးချက်မနဲ့ မိုက်ကရိုဖုန်းထဲ ငိုပြီး ရန်တွေ့တာကို ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အတွေ့အကြုံက မရှိတော့ မှင်သက်သွားပြီး ဘာမျှ ပြန်မပြောနိုင် လောက်အောင် အံ့သြခဲ့ရပါတယ်။ စိတ်မကောင်း ကြီးခြင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဝမ်းနည်းပက်လက် ခံစားသွားရတာတော့ အမှန်ပါ။ သူလေးရဲ့ ဝမ်းနည်းမှုက အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတော့ တုန်လှုပ်သွား တာတော့ အသေအချာပါပဲ။
ဒီလိုကြုံတွေ့ရရင်ဖြင့် ယောက်ျားသားတွေ အနေနဲ့က .. ..
ဒီလောက် မျက်ရည်လွယ်နေမှတော့ စိတ်မရှည်တော့ဘူး ..
ထစ်ကနဲရှိ ငိုနေတာပဲ ..
နင့်ငိုရှိုက်သံက ငါ့စိတ်ကို ညစ်ငြူးစေတယ် .. အဲဒီလိုတွေတော့ လုံးဝ မတုန့်ပြန်မိစေဖို့ အထူးပဲ တိုက်တွန်း လိုပါတယ်။ ယောက်ျား ရင့်မာတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကိုယ်ချင်း မစာနာရာ ကျပါတယ်။
ခြုံငုံပြီးပြောရရင် မိန်းကလေးတွေ ငိုကြခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဓိက အကြောင်း(၃)ချက်ရှိပါတယ် ….
(၁) ခံစားချက်ကြောင့် ငိုခြင်း။
(၂) မခံချင်စိတ်ကြောင့် ငိုခြင်း။
(၃) အကြောင်းမဲ့ ငိုခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာအကြောင်းနဲ့ပဲ ငိုငိုပါ။ သူတို့လေးကို လျစ်လျူမရှုဘဲ နည်းနည်းပါးပါး တောင်းပန်ပြီး ချော့မော့လိုက်ရင် မိနစ် အနည်းငယ်လောက်နဲ့ ကျေနပ်ပြီး ပီတိဝေဖြာ ပြုံးပန်းဝေဆာ လာပါလိမ့်မယ်၊ မိန်းကလေးဆိုတာ အချော့ကြိုက် တာကိုလည်း ကိုယ်က နားလည်ထားရပါမယ်။ ဝမ်းနည်းလို့ပဲဖြစ်စေ၊ အကြောင်းမဲ့ ကြောင့်ပဲဖြစ်စေ၊ ဘာကြောင့်ပဲ ငိုငို ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားသားတွေ အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ချဉ်းကပ်ဖို့ နည်းလမ်းကတော့ လက်ကိုင်ပဝါ သန့်သန့် ဖြူဖြူ စင်စင်လေး တစ်ထည်ကို အဆင်သင့် ဆောင်ထားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးလို ပါတယ်။ အားလုံးကို လေးစားလျက်ပါ။ အမှားအယွင်း တစ်စုံတရာ ရှိရင် ခွင့်လွှတ်စေချင် ပါတယ် .. .. ။ (၂၄-၈-၂၀၀၈၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ အောင်ပန်းမြို့)
Posted by Welcome at 2:50 PM
လိုအပ်ချက်နည်းနည်းနဲ့ ထိရောက်မှုများများ Zinc ဓာတ်
ကိုကိုတွေသိထားရမယ့် ညီမလေးတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
ရင်ဖွင့်ဖော် .. .. သို့